देवर-भाउजूको सम्बन्ध पूज्य, साली-भेनाको? :: सृजना पोख्रेल :: Setopati
देवर-भाउजूको सम्बन्ध पूज्य, साली-भेनाको?
लौन ससुरा बा! मलाई साली मनपर्‍यो...
दुखेका चित्तहरूले सोधे- 'यस्ता गीत सुनेर हुर्किएकी सानी बच्चीले अब भिनाजुको सम्बन्धलाई कसरी बुझ्छे?'
दुखेका चित्तहरूले भने- 'यस्तो गीतले भिनाजु सालीको सम्बन्धमा प्रश्न उठायो। सम्बन्धलाई बदनाम गर्‍यो।'
दुखेका चित्तहरू रिसाए- 'यसैगरी कुनै भाउजूले, 'बुढाको घर गएपछि देवर मनपर्‍यो' भनिन् भने? के हामी त्यस्तो गीत स्वीकार्न सक्छौं? सो गीतमा यसरी नै नाच्न सक्छौं?'
खासमा 'देवर भाउजू र भिनाजु सालीको सम्बन्ध एकै होइन है' भन्ने अभिप्रायको मुख्य प्रायोजक त देशको मुख्य फौजदारी कानुन नै हो- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४।
हाम्रो समाजको मान्यताले लुकेर भन्यो, 'बिहे गरेपछि भाउजू चाहिँ दाजुको सम्पत्ति बन्छिन्। त्यसैले उनले देवरलाई आँखा लाउन मिल्दैन। भिनाजु त दिदीको सम्पत्ति बन्ने होइनन् नि, भिनाजुले सालीलाई आधी घरवाली भन्दा पनि अचम्म मान्नु पर्दैन।'
त्यति कम थियो, झन् हाम्रो कानुनको मान्यताले खुलेरै भनिदियो- 'देवर भाउजू भइसकेपछि सहमतिमै पनि नजिकिने छुट छैन।'
यो सोध्दा खुला उत्तर, 'अहँ, त्यो हाम्रो सरोकारमा पर्दैन।'
माथिको गीत लेख्दा गीतकार एक्लै बोलेका होइनन्, हाम्रो समाजको पितृसत्ता बोलेको हो। गीतले त 'समाज जस्तो छ, त्यही देखाएको हो' भनेर उम्किन खोज्छ होला। तर कानुनले समाज कस्तो बन्नुपर्ने हो, त्यो देखाउनु पर्छ। अझ गीतलाई त सृजनात्मक छुट पनि हुन्छ होला। तर कानुनलाई सृजनात्मक छुट हुँदैन। हुनु हुँदैन। कानुन एकजनाले लेख्ने गीत होइन।
यस परिच्छेद अन्तर्गतको दफा २२० जबरजस्ती करणी अर्थात बलात्कारसँग सम्बन्धित छ। यस दफाले सिधै भन्छ- कसैले कुनै 'महिला'लाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ।
(यस दफालाई मंसिरमा आएको 'यौन हिंसाविरूद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश' ले अलि फराकिलो बनाउने हल्ला चलेको थियो तर हल्ला पास भने भएन।)
यद्यपि, कुनै बलात्कृत पुरुषले यो कानुनको सहारा लिन भने पाउँदैन। किनकी हाम्रो कानुनअनुसार बलात्कार 'मान्छे' को निजी परिधि र शरीरमाथि हुने अपराध होइन। बलात्कार त महिलाको सतित्व र इज्जतमाथि हुने अपराध मात्रै हो।
यो कानुन ठ्याक्कै त्यही भेदभाव गर्छ। हामीले 'फलाएको' संविधान मसलेदार भयो। तर त्यही संविधान टिपेर 'पकाएको' कानुनमा नुन पुगेन। न्याय खल्लो भयो।
यस्तो लाग्छ, हाम्रा कानुन निर्मातालाई आधुनिक देखिने होड त छ, तर प्रस्ट हुने फुर्सद छैन। महिलाहरूले पितृसत्तालाई छुसुक्क केही भन्नेबित्तिकै 'नट अल मेन' भन्दै झम्टिन आउने आवाजले पनि यो असमानता चाहिँ देखेको छैन।
हामी यस्तो समाजमा बस्छौं, जहाँ कुनै केटाले 'मलाई जबरजस्ती गरियो' भन्दा मात्रै उसलाई सिधै नामर्दको ट्याग लगाइन्छ। त्यसैले जति शारीरिक जबरजस्ती भए पनि हाम्रा प्रायः केटाहरू सकुन्जेल सहन्छन्। नसक्ने नै भएपछि कानुनको सहारा लिन्थे होला। तर उनीहरूका लागि बलियो कानुन नै छैन।
हामी यस्तो समाजमा छौं जहाँ एक त समलिंगीको अस्तित्व स्वीकार्नै मान्छेलाई हम्मेहम्मे भइरहेको छ। अझ यस्तोबेला कुनै समलिंगी पुरुषले 'मलाई अर्को समलिंगीले बलात्कार गर्‍यो' भन्ने कुरै आएन। यस्तो गुनासोले त झन् समलिंगी पहिचानलाई नै दबाउँछ कि भन्ने डर। त्यसैले होला यो आवाज पनि खासै उठ्दैन।
कुनै पुरुषको पनि बलात्कार हुन सक्छ, यो सम्भावना पितृसतात्मक सोचका लागि निषेधित क्षेत्र जस्तै बनेको छ। झन् अहिलेका समयमा, जब हाम्रा कानुन निर्माता नै पीडितको उमेर पुगेकै भरमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई 'मोज गर्ने अनि फसाउने' को पगरी गुथाइदिन व्यस्त छन्।
पहिलो कुरा त बलात्कार उमेर, शरीर, बल वा सम्बन्धले होइन, यौनसम्बन्ध राख्ने सहमतिले निर्धारण गर्छ भन्ने नै बुझाउन बाँकी रहेछ। अझ त्यसमा थपेर 'सदाबहार बलियो पक्ष मानिएका पुरुषको पनि बलात्कार हुन सक्छ' भन्ने कुरा सिकाउनु, तिनै कानुन निर्माताको बुढ्यौलीलाई जवान बनाउनु जत्तिकै अप्ठ्यारो काम होला।
'कल्पना बाहिरको कुरा के छलफल गर्नु,' यसो सोचेर यतिका नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो होला। तर कल्पना नगरेरै सत्य बदलिँदो हो त, बलात्कार नै नहुने समाज कल्पिन के पो गाह्रो छ र!
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १६, २०७७, ०९:३२:००